Saadaasha Khabiirka Mark Lawrenson Ee Wareegga Afraad Ee FA Cup Iyo Kooxaha Waaweyn Ee Uu Guul-darrada Ugu Bushaareeyey - Gool24.Net
Saadaasha Khabiirka Mark Lawrenson Ee Wareegga Afraad Ee FA Cup Iyo Kooxaha Waaweyn Ee Uu Guul-darrada Ugu Bushaareeyey
Horyaalka Premier League ayaa toddobaadkan fasax geli doona, waxaanay kooxuhu ciyaari doonaan tartanka FA Cup oo wareeggii afraad maraya.
Liverpool ayaa u tegi doonta kooxda yar ee League One ka ciiyaarta ee Shrewsbury maalinta Axadda, waxaanu Klopp u baahan yahay inuu ciyaarsiiyo laacibiin da’yar sidii uu sameeyey kulankii Everton ee wareeggii saddexaad oo uu nasiyey xiddigihiisa rigliga ah marka laga reebo James Milner oo dhaawac culus kasoo gaadhay ciyaartaas iyo Adam Lallana oo aan inta badan fursado ka helin kooxda koowaad.
Arsenal oo ku dhibaatoonaysa horyaalka Premier League ayaa waxay u tegi doontaa Bournemouth, sidaas oo kalena Tottenham ayaa marti u noqon doonta Southampton, hase yeeshee labadan kooxood ee ka dhisan London waxay ka bixi doonaan tartanka iyagoo guul-darrooyin kala soo laabanaya kooxaha ay u tegayaan, sida uu saadaaliyey khabiirka BBC Sports ee Mark Lawrenson.
Manchester United oo laba guul-darro oo xanuun kulul oo ay kala soo kulantay Liverpool iyo Burnley wali dakharradoodii kasii muuqdaan ayaa waxay waajihi doontaa kooxda yar ee Tranmere oo xalay tartanka ka saartay Watford oo ciyaar waqti dheeraad ah lagu daray 2-1 kusoo garaacday, laakiin sida uu rumaysan yahay Mark Lawrenson, tababare Solskjaer waxay ciyaartani u noqon doontaa xummad jabin inyar lagu illoobo guul-darrooyinkii is xigay, waxaanu lasoo noqon doontaa guul 2-0 ah.
Leicester City ayaa iyaduna ah koox weyn oo uu khabiirku sii sheegay inay kusoo guul-darraysan doonto ciyaarta ay Sabtida berri ah martida ugu noqon doonto Brentford, hase yeeshee Chelsea, Manchester City iyo Liverpool ayaa kaga farxiyey saadaasha.
Saadaasha Khabiirka oo dhamaystiran
Northampton 1-1* Derby
QPR 2-0 Sheff Wednesday
Coventry 1-1* Birmingham
Newcastle 2-0 Oxford United
Reading 1-1* Cardiff
Tranmere 0-2 Manchester United
Shrewsbury 0-2 Liverpool
Bournemouth 2-0 Arsenal
Fiiro Gaar ah: Natiijada ay hor taallo calaamadda (*) waxay ka dhigan tahay in kooxda ay dhinaceeda saaran tahay ay kusoo bixi doonto rikoodheyaal.